Karoona Ma Ku Noolaan Karaa Soomaaliya? | Xaqiiqonews
Karoona Ma Ku Noolaan Karaa Soomaaliya?
Tan iyo markii ay bilaabatay sheeko xariireedka Karoona, dunida ayaa si isku mid ah farta ugu heysay wadnaha, laakiin saynisyahanada waxa ay hadda na leeyihiin bishaareysta dadka ku nool wadamada kuleelaha.
Inkastoo dadka qaar cudurkani ay ugu yeeraan “dilaa” , balse natiijooyinka la diwaangeliyey ayaa aad uga duwan sheekadaasi, inta la ogyahay 2% oo kaliya ayaa u dhintay cudurkan, taasi oo wax badan ka badalan khuraafaadka la isku baahiyey ee sheegayey in cudurkani uu yahay “geeri socota”.
“Cudurkani waa cudur ku dhaca neef mareenka, sidaa darteed qaboobaha ayaa u daran” ayuu yiri Nelson Michael, oo ah hogaamiyaha kooxda qaabilsan baaritaanka caafimaadka ee Milatariga Mareykanka.
Telefishinka CNN ayaa sheegay in marka la fiiriyo goobaha uu cudurkan ku badan yahay sida Wuhun oo uu ka soo bilowday, Iiraan iyo Kuuriyada koonfureed ay wadagaan “jawi isku mid ah” iyo hogaamis isku nooc ah.
Inkastoo dhaqaatiirta iyo Saynisyahanada ay isticmaaleen erayga “rajo”, hase yeeshee waxa ay isku raacsanyihiin in cudurkan guud ahaan hoos u dhici doona marka wadamada qaboobaha ay galaan xilliga Xagaaga (summer).